Beware of Slave Merchants
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/30/20090အကြံပြုခြင်း
30 September ဒိုင်ယာရီ
၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၉
အခုတလော နအဖတို့က သူတို့ရဲ့ကြေးစားဆောင်းပါးရှင်တွေကတဆင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတီးလုံးကို ခပ်မြိုင်မြိုင် ခပ်သွက်သွက်ကလေး တီးလာချိန်မှာ ပြည်တွင်းက ‘ဖိုးက,ချင်’ များကလည်း ‘ဆိုင်းသံကြားရင် က,ချင်ချင်’ ဆိုတဲ့ စကားလို လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်နေတာတွေကို ကြားနေတွေ့နေရတယ်။
တကယ်တော့ နအဖရဲ့ အဲဒီ “၂၀၁၀ မျက်လှည့်ရုပ်စုံသဘင်မဟာစင်တော်ကြီး” ဇာတ်အဖွဲ့ဟာ ‘အနှစ်ဗလာ အကာပြဲ့ပြဲ့’ ကျီးအာသီးသာဖြစ်တယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးသာမက နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကပါ သိထားကြတာပါ။ ဒါကို အဲဒီဖိုးက,ချင်တွေ မသိဘူးဆိုရင်တော့ အံ့သြစရာပဲ။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တုန်းက ပြည်ပက ပြန်ရောက်အလာ မနီလာလေဆိပ်မှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ နီနွိုင်းအကွီနိုဘက်က လိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့ ရှေ့နေတဦးက အဲဒီအမှုကို စစ်ဆေးနေတဲ့ တရားသူကြီးတွေကို တရားရုံးမှာ ပြောတဲ့စကားကိုပဲ ပြန်အမှတ်ရမိတော့တယ်။
နီနွိုင်းအကွီနိုကို ဘယ်သူသတ်သလဲဆိုတာကို ရှည်လျားထွေပြား ပေများစေဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လှည့်ပတ်မေးမြန်း စစ်ဆေးကြားနာနေတဲ့ တရားသူကြီးတွေကို အမြင်ကပ်လာတဲ့ အဲဒီရှေ့နေကြီးက အငေါ်တူးပြီး ပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။ သူပြောလိုက်တာက “ဂုဏ်သရေရှိ တရားသူကြီးမင်းများခင်ဗျား … နီနွိုင်းအကွီနိုကို ဘယ်သူသတ်သလဲဆိုတာကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တနိုင်ငံလုံးက သိနေကြပါပြီ။ မသိတာဆိုလို့ လူကြီးမင်းတို့ တရားသူကြီးတစုပဲ ကျန်ပါတော့တယ်” လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း နအဖရဲ့ မျက်လှည့်သဘင်အကြောင်း မသိတာဆိုလို့ အဲဒီဖိုးက,ချင် တစုပဲ ရှိမယ်ထင်ပါရဲ့လို့ ပြောရပါတော့မယ်။
နအဖရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတီးလုံးကို “တက်ခနီကာလာ” စကားလုံးတွေသုံးပြီး ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ စည်းချက်လိုက်ပေးနေကြသူတွေထဲမှာ အဲဒီဖိုးက,ချင်တွေက ပထမဆုံး ရှေ့ကို တိုးထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီတက်ခနီကာလာ စကားလုံးတွေထဲမှာ အခြေခံဥပဒေ မရှိတာထက် ရှိတာက ပိုကောင်းတယ်၊ နိုင်ငံရေးအမြင် ပြောင်းသွားပြီ၊ အထိုင်သစ်မှာ ဗျူဟာအသစ်နဲ့ သွားရမယ်၊ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို မထောက်ခံဘူး၊ ဒါပေမယ့် တခြားရွေးစရာ မရှိတော့လို့ ဒါကိုပဲ လက်ခံရမယ်။ အများကြိုက် လက်ခုပ်ချူ နိုင်ငံရေးခေတ်မရှိတော့ဘူး။ နအဖ လက်ပါးစေနဲ့ ၀ိုင်းတော်သားတွေကို မဲမပေးချင်တဲ့ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအတွက် ထည့်စရာမဲပုံး ဖန်တီးပေးရမယ် စသဖြင့် စုံတကာစေ့အောင် ပါဝင်တယ်။
အဲဒီတက်ခနီကာလာ စကားလုံးတွေအားလုံးမှာ အရိပ်ထင်နေတဲ့ ကျောရိုးအတွေးအခေါ် ကတော့ “နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တာကိုသာ လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်” ဆိုတဲ့ အယူအဆပဲဖြစ်တယ်။ ဒီအယူအဆက နအဖကိုယ်တိုင်ကလည်း နှပ်ကြောင်းပေးနေတဲ့ အယူအဆပါ။ “မပြေးသော်လည်း ကန်ရာရှိ” ဆိုသလို နအဖနဲ့ ရပ်တည်ချက် သဘောထားချင်းတူနေတဲ့ အဲဒီတက်ခနီလာ စကားလုံးပိုင်ရှင်များရဲ့ အယူအဆက ဒီလိုပါ။ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ရာစုတ၀က် နီးပါးကြာ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး တိုက်ပွဲဆင်ခဲ့ကြပြီးပြီ၊ အခုအထိ မနိုင်သေးဘူး၊ မနိုင်တဲ့အပြင် လက်ရှိအခြေအနေမှာ စစ်အုပ်စုရဲ့ အင်အားက မိမိတို့ထက် အဆမတန်သာနေတယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီလိုအခြေအနေမှာ စစ်အုပ်စု ပေးသလောက်ပဲယူ၊ ကျွေးသလောက်ပဲစားပြီး အားမွေး၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်၊ လွှတ်တော်ထဲရောက်၊ နောက်မှ ဒီမိုကရေစီ စည်းဝိုင်းကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ချဲ့ယူပြီး အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အထိရောက်အောင် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သွား၊ နောက်ဆုံးမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အခြေခံဥပဒေအရ ဖျက်သိမ်း၊ အဲသလိုဖြစ်ပါတယ်။
အံ့သြစရာကောင်းတာက အဲသလိုကြွေးကြော်ပြီး ပထမဆုံး ရှေ့တန်းထွက်လာသူတွေထဲမှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကမှာ အစဉ်အလာနဲ့ အတွေ့အကြုံ တစုံတရာရှိခဲ့သူ ဦးသုဝေတို့လို ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ ပါဝင်နေလို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အံ့သြစရာ မဟုတ်ရပြန်တာကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှစ် န၀တရဲ့ ပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပေါ်လာတုန်းကလည်း ၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးအချိန်အခါနဲ့ အကိုက်ညီအသင့်လျော်ဆုံး တောင်းဆိုမှုဖြစ်တဲ့ “ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေး” ကို ပထမဆုံးလွှတ်ချပြီး ပထမဆုံး အလံဖြူတင် ပါတီတည်ထောင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သူဟာလည်း ဦးသုဝေတို့ တစုဖြစ်နေခဲ့လို့ပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ မိမိတို့အနေနဲ့ ဦးသုဝေအုပ်စု အပါအ၀င် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ လုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုသူအားလုံးရဲ့ စေတနာတွေ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အငြင်းမပွားလိုဘူး။ မိမိထောက်ပြဆွေးနွေးလိုတာက သူတို့ရဲ့ တွေးပုံတွေးနည်း (Way of Thinking) နဲ့ သူတို့ရွေးချယ်တဲ့ နည်းလမ်းများ (means) အကြောင်းဖြစ်တယ်။
“ဖြစ်နိုင်တာလုပ်တာ နိုင်ငံရေး” ဆိုတဲ့ အဆိုကို မိမိလည်း သဘောတူတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့လက်ရှိအခြေအနေမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ နည်းလမ်းသာလျှင် တခုတည်းသောဖြစ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ အယူအဆကိုတော့ မိမိသဘောမတူဘူး။ အဲဒီလို သဘောမတူဖို့အတွက် ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းအချက်တွေ အများအပြား ရှိနေတယ်လို့ မိမိယူဆတယ်။
အဲဒါတွေထဲမှာ အရေးအကြီးဆုံး အချက်ကတော့ အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်ပဲ။ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကံကြမ္မာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ အဓိကနေရာက ပါဝင်နေသူ (Stake holder) ရယ်လို့ တွက်ကြည့်ရင် (၃) ဦးပဲရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ နအဖ ရယ်၊ အန်အယ်လ်ဒီရယ်၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရယ် ဒီ (၃) ဦးပဲဖြစ်တယ်။ အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အနေအထား မှိန်ဖျော့အားနည်းသွားစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ နအဖ က အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး ကြိုးစားပမ်းစားနဲ့ အခြား Stake holder တွေ အများအပြား ရှိနေသယောင် ဖန်တီးထားခဲ့ပေမယ့် မြန်မာပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကို အဓိက အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာကတော့ အဲဒီအုပ်စု (၃) စုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မြန်မာပြည်သူတွေကလည်း သိတယ်၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း သိတယ်။ အရေးပါတဲ့ Stake holder တွေထဲမှာ ဦးသုဝေတို့အုပ်စု အပါအ၀င် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို မျက်စပစ်နေသူ ဘယ်သူမှမပါဝင်ဘူး။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် နယ်စပ်က လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ (အပစ်ရပ်ရော၊ အပစ်မရပ်ပါ) တောင် မပါဝင်ဘူး။
ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာက အဲဒီအုပ်စု (၃) စုပဲ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ (၃) စုမှာမှ အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက “ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ” (စီအာပီပီ) ဆိုပြီး တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ထားတာမို့ ဒီကနေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာက နအဖနဲ့ စီအာပီပီရဲ့ သဘောထားရပ်တည်ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ နအဖဓာတ်ခွဲခန်းထဲက မွေးထုတ်ထားတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ အရွယ်စုံ၊ အရောင်အသွေးစုံ၊ အမျိုးအမည်စုံပြီး အခုအချိန်မှာ မြန်မာ့အနာဂတ်အရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ Stake holder တွေယောင်ယောင် မြင်နေကြရပေမယ့် မလိုအပ်တော့တဲ့အခါ နအဖ က ကြိမ်တချက်ဝင့်လိုက်တာနဲ့ အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားကြမယ့် အရာတွေဖြစ်တယ်။
အဲဒီတော့ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နအဖနဲ့ စီအာပီပီဆိုတဲ့ Stake holder ကြီးနှစ်ခုတည်းရှိတဲ့ အခြေအနေမှာ တခုက လုံးလုံးလျားလျား သဘောမတူဘဲ ဆန့်ကျင်နေတဲ့ ကိစ္စတခုကို ကျန်တခုက ဇွတ်လုပ်မယ်လို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အခြေအနေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တခုတည်းသော ဖြစ်နိုင်ခြေ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ဆိုနိုင်ပါ့မလဲ။
တကယ်တော့ နအဖ က စီအာပီပီကို သူတို့ရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ထောင်ချောက်ထဲ ၀င်လာအောင် အသံပေါင်းစုံ ဖန်တီးပြီး တောချောက်နေတာသာဖြစ်တယ်။ အန်အယ်လ်ဒီက ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ကို ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ပြီး ရပ်ခံနေသမျှကာလ ပတ်လုံး နအဖရဲ့ အဲဒီထောင်ချောက်ဟာ ဘာတန်ဖိုးမှ ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ အန်အယ်လ်ဒီ သို့မဟုတ် စီအာပီပီ မပါဘဲ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကို နအဖ က ဇွတ်အတင်းကျင်းပလို့ ပြီးစီးသွားစေဦးတော့၊ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကနေ နအဖဟာ သူလိုချင်တာ ဘာတခုမှ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကို နအဖကိုယ်တိုင်လည်း သိနေတယ်။
အမှန်တော့ ‘ဖြစ်နိုင်တာ’ ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဟာ ဖွင့်ဆိုသူရဲ့ သဘောထား ရပ်တည်ချက်ပေါ်မှာသာ မူတည်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖွင့်ဆိုသူရဲ့ သဘောထားရပ်တည်ချက်က ‘ဖြစ်နိုင်တာ’ ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ပမာဏကို ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။
အညံ့မခံ အလံမလှဲတိုက်ပွဲကို ရဲရဲတိုက် အောင်ပွဲကို ရဲရဲရယူတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ အများအပြား ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း အဖြစ်အပျက်တခုအကြောင်း အရင်ဆုံး ပြောပြချင်တယ်။ ဂျာမဏီနာဇီနဲ့ အီတလီ၊ ဂျပန်ဖက်ဆစ်တပ်တွေက ကမ္ဘာ့ဒေသအများစုကို သိမ်းပိုက်စိုးမိုးထားကြတယ်။ လန်ဒန်မြို့ဟာလည်း ဂျာမန်လေယာဉ်တွေက ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်နေလို့ စိစိညက်ညက်ကြေနေပြီ။ ပြင်သစ်လည်း ကျသွားပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဗြိတိသျှအစိုးရအဖို့ အလုပ်သင့်ဆုံး ဖြစ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးကတော့ ဟစ်တလာနဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပြီး စစ်ပြေငြိမ်းဖို့ပေါ့။ ဟစ်တလာ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ နယ်မြေဒေသ မှန်သမျှကို ဟစ်တလာလက်ထဲ တရားဝင်အပ်နှင်းလိုက်ဖို့ပေါ့။ တနည်းပြောရရင် လက်နက်ချ အရှုံးပေးလိုက်ဖို့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ဗြိတိသျှကျွန်းစု ကိုယ်တိုင်အပါအ၀င် ဗြိတိသျှအင်ပါယာတခုလုံး နာဇီဖက်ဆစ်တွေရဲ့ ချေမှုန်းတိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခြင်း ခံနေရချိန်မှာ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ၀င်စတန်ချာချီရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ “ဘယ်လောက်ပဲ အရင်းအနှီး ပေးရပစေ၊ ကျုပ်တို့ဟာ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာ တိုက်မယ်၊ လေယာဉ်ကွင်းတွေမှာ တိုက်မယ်။ ကျုပ်တို့ဟာ လယ်ကွင်းတွေထဲမှာလည်း တိုက်မယ်၊ လမ်းမတွေပေါ်မှာလည်း တိုက်မယ်။ ကျုပ်တို့ဟာ တောင်တန်းတွေပေါ်မှာလည်း တိုက်မယ်။ ကျုပ်တို့ဘယ်တော့မှ လက်နက်မချဘူး” ("Whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender." ChurchillWe will never surrender) တဲ့။ အဲဒီနောက် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဘယ်လိုရပ်တည်ခဲ့သလဲ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဘယ်လို အဆုံးသတ်သွားသလဲ။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ။
နောက်အဖြစ်အပျက်တခုကတော့ ပိုလန်နိုင်ငံက အာဏာရှင်ကွန်မြူနစ်အစိုးရနဲ့ လက်ခ်ျဗာဝင်းဆား ဦးဆောင်တဲ့ အလုပ်သမားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးသမဂ္ဂတို့ရဲ့ တိုက်ပွဲပါ။ ကွန်မြူနစ်အစိုးရရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားက အဲဒီအဖွဲ့ဟာ မြေပေါ်တ၀က် မြေအောက်တ၀က် အနေအထားနဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံလှုပ်ရှားခဲ့ပြီး တော်လှန်ရေးအခြေအနေ ရင့်မှည့်လာတဲ့အချိန်မှာ ပြည်သူကို ပြတ်ပြတ်သားသားဦးဆောင်ပြီး အောင်ပွဲကို အရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တခုက ဆာဗီးယားနိုင်ငံက အတိုက်အခံတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောစနီးယားနဲ့ ခရိုအေးရှား နိုင်ငံတွေ ခွဲထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ သမ္မတလောင်း ကော့စတာနီဆာ ဦးဆောင်တဲ့ အတိုက်အခံတွေက မဲအသာရနေတဲ့အချက် ထင်ရှားပေါ်လွင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိသမ္မတ မီလိုစီဗစ်က အရှုံးကို ၀န်မခံဘဲ စစ်တပ်ကို အသုံးပြုပြီး သူ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်တွေ ထုတ်နေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကော့စတာနီဆာက ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူအနိုင်ရရှိတယ်လို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြတ်ပြတ်သားသား ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ သူရဲ့ ရဲဝံ့ပြတ်သားတဲ့ အဲဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် တလျှောက်လုံး မီလိုစီဗစ် ခိုင်းသမျှကို လျှောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်တချို့ ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ဆာဗီးယားစစ်တပ်ဟာ ခြောက်အိပ်မက်က လန့်နိုးလာပြီး အတိုက်အခံတွေ ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်သူလူထုဘက်က ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆားဗီးယားရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ တဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရတယ်။
နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာတခုကတော့ ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက “ပြည်သူ့အာဏာလှုပ်ရှားမှု” ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက အာဏာလက်ရှိ သမ္မတမားကို့စ်နဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ကိုရာဇန်အကွီနိုတို့ ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ အကွီနို အနိုင်ရရှိတဲ့ ရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာနေပေမယ့် မားကို့စ်ဟာ အာဏာကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ဖို့ နောက်ဆုံးအချိန်အခါအထိ ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ ဒီအခါမှာ ဘယ်တုန်းကမှ နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်ခဲ့တဲ့ မုဆိုးမတဦးလည်းဖြစ်သူ ကိုရာဇန်အကွီနိုက ရွေးကောက်ပွဲမှာ မိမိအနိုင်ရရှိကြောင်း ရဲရင့်ပြတ်သားစွာ ကြေညာပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကို ဦးဆောင်ဆင်နွှဲလိုက်တာကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ မာ့ကို့စ် ပြည်ပကို ထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပြီး အာဏာရှင်စနစ်လည်း ပြိုလဲသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။
အခုတင်ပြခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေမှာ အတိုက်အခံ လူထုခေါင်းဆောင်တွေဟာ “ဖြစ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေး” ဆိုတာကို လက်ရှိအာဏာရအစိုးရ ပေးသလောက်ယူ ကျွေးသလောက်စားပြီး လိမ်လိမ်မာမာနေတဲ့ နိုင်ငံရေးလို့သာ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင် အဲဒီနိုင်ငံတွေက ပြည်သူလူထုတွေဟာ အခုထိ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ ဆက်ပြီးနေနေကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တခါ နအဖရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်းချက်အတိုင်း လိုက်ကဖို့ ပြင်နေသူတွေ အမြဲမေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတခုရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါက “ဒီရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ရင် ဘာလုပ်ကြမှာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲ။
အဲဒီမေးခွန်းကိုကြားတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ်လောက်က ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ အာကစားဂျာနယ်တခုထဲက ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို သွားအမှတ်ရမိတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးမှာ မြန်မာ့ဘောလုံးရွှေခေတ် (ဗဟာဒူးတို့ခေတ်) ဘောလုံးသမားကြီးတယောက်ရဲ့စကားကို ဆောင်းပါးရှင်က ကိုးကားဖော်ပြထားတယ်။ မြန်မာ့ဘောလုံးအသင်းဟာ မိမိထက်အင်အားပိုကြီးတဲ့ အသင်းတွေရဲ့ ခံစစ်ကို ဘယ်လိုချိုးဖောက်ပြီး ဂိုးတွေသွင်းယူနိုင်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆောင်းပါးရှင်က မေးကြည့်တော့ အဲဒီဘောလုံးသမားကြီးက ဟောသလိုပြောခဲ့ပါသတဲ့။ “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခြေခံနည်းစနစ်ကတော့ ရိုးရိုးစင်းစင်းကလေးပဲဗျ၊ ကိုယ်ဘောလုံးရရင် လွတ်နေတဲ့ ကိုယ့်အသင်းသားကို အမြန်ဆုံးရှာပြီး ဘောလုံးကို အမြန်ဆုံးပို့ပေး… ဒါပဲဗျ ... အချိန်တန်တော့ ဂိုးတွေရသွားတာပါပဲ”။
အဲသလိုပါပဲ။ ဒီကနေ့ မြန်မာ့ပစ္စက္ခနိုင်ငံရေးအခြေအနေက မရှုပ်ပါဘူး။ ရှင်းရှင်းလေး ရိုးရိုးစင်းစင်းလေးပါ။ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ Mandate ရထားတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ၊ စီအာပီပီတို့အနေနဲ့ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးအတွင်း ပြည်သူတွေ တောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့ အရာတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အခြေခံမူတွေကို ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ပြီး (ဦးဝင်းတင် ပြောသလို) ပြည်သူတွေဘက် မျက်နှာမူရပ်တည်ပေးကြဖို့ပါပဲ။ မှန်မှန်ကန်ကန် ရပ်တည်နေခြင်းဟာ ထက်ထက်မြက်မြက် အလုပ်လုပ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အန်အယ်လ်ဒီက ထုတ်ပြန်တဲ့ “ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်” ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကို ထင်ဟပ်ထားတဲ့၊ ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကို မျက်နှာမူထားတဲ့ ကြေညာချက်ပါ။ ဒီကြေညာချက်ဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ အခြေခံမူလည်းဖြစ်တယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် နိုင်ငံရေးမှာ အလှည့်အပြောင်းတွေ၊ အကျပ်အတည်းတွေ တွေ့ကြုံရစမြဲပါ။ ချော့လုံး ခြောက်လုံးတွေနဲ့လည်း ကြုံရစမြဲပါ။ ဘယ်လိုပင် ချော့ချော့၊ ခြောက်ခြောက်၊ ဘယ်လိုပင် အကျပ်အတည်းတွေနဲ့ ကြုံရကြုံရ ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို မသွေဖည်ဖို့ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကို ထင်ဟပ်ထားတဲ့ အခြေခံမူတွေကို မသွေဖည်မိစေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မူမှန်မှ အလုပ်မှန်မယ်။ အလုပ်မှန်မှ အောင်ပွဲခံမှာပါ။
တကယ်တော့ အမှန်တရားက ပြည်သူတွေဘက်မှာပါ။ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့အားကသာ အရာရာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာပါ။ ပြည်သူနဲ့ အမှန်တရားကသာ တနေ့နေ့တချိန်ချိန်မှာ မလွဲမသွေအောင်ပွဲခံရမှာပါ။ စောစောကပြောသလို ဂိုးဆိုတာ အချိန်တန်ရင် မလွဲမသွေ ရလာမှာပါ။ အခုအချိန်မှာ ဘောလုံးဟာ နအဖကွင်းဘက် နအဖ ခြေထဲမှာပါ။ ညစ်ပတ်မှုအပေါင်း သရဖူဆောင်းခဲ့လို့ နိုင်ငံရေးအရ အရှုံးကြီးရှုံးပြီး ပရိသတ်ချဉ်ဖတ်ဖြစ်နေရတဲ့ နအဖဟာ ခုချိန်မှာ သူ့ခြေထဲက ဘောလုံးကို ဘေးကိုလည်း ကန်မထုတ်ရဲ၊ ပြိုင်ဘက်အသင်းကိုလည်း တိုက်စစ်မဖွင့်ရဲ၊ အချိန်လည်း သိပ်ဆွဲလို့မရတော့တဲ့ အခြေအနေပါ။ အခြေခံသေနင်္ဂဗျူဟာ မှန်ကန်ပြီး ကစားကွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကစားနေလို့ နိုင်ငံရေးအရ အသာစီးရနေတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တွေက နအဖ ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ကန်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဘောလုံးကို ကိုယ်ကွင်းကိုယ့်ခြေထဲ ရောက်လာတဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ခြေထဲရောက်လာမယ့် ဘောလုံးကို ဘယ်လိုပြန်ကန်မယ် ဘယ်လိုဂိုးသွင်းမယ် ဆိုတာကတော့ ကြိုပြောထားရမယ့် ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုအချိန် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ တကယ်တမ်း ခေါင်းစားရမှာက နအဖပါ။ အဲဒါကို နအဖ ဘက်က ကူပြီး ခေါင်းစားပေးနေသူများကို ပြောချင်တဲ့ စကားတခွန်းက “ဒီရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ရင် ဘာလုပ်ကြမှာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေကို ခင်ဗျားတို့ မသိပေမယ့် မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးက သိတယ်” ဆိုတဲ့ စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
NDF Bulletin Sep 2009
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/27/20090အကြံပြုခြင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာ ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရအောင် သတ္တိရှိမူ၊ရဲရင့်မူ၊ပြတ်သားမူတွေနှင့်အတူ ပြည်သူတွေကို အလွန်လေးစားပြီး ဗမာ့တပ်မတော်ကြီးကိုယ်လည်း စတင်တည်ထောင်သွားခဲ့သည့် အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်၊ ဗိုယ်ချုပ်က တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာဖြစ်စေ သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ စစ်တပ်ပေါ်မှာဖြစ်စေ သနားကြင်နာမှု အပြည့်အ၀ရှိခဲ့တာဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်သမိုင်းဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမျက်နှာပြင်မှာ လှပနေဆဲပါ၊၊
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အခုလိုမျိုး ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်လာရခြင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကိုမွေးခဲ့တဲ့ နတ်မောက်က လက်ဦးဆရာတော်နှင့် မိဘတွေရဲ့ ဗီဇတွေက အခြေခံပါတယ်၊ အောင်ဆန်းဟာ ထောင်စခန်းကိုမကြောက်၊ ပြည်သူတွေ အမှောင်ကြနေတာကြောင့် နယ်ချဲ့ကို ဗြောင်ကျကျ ပြောဆိုတတ်သလို၊တိုက်ပွဲကိုယ်လည်း ကြောက်နေသူတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊
တိုင်းပြည်လွတ်လပ်းရေးရအောင် တိုက်ပွဲကာလမှာ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့အတူ သံဃာတော်တွေ ပါခဲ့သည်ကို သမိုင်းဓာတ်ပုံတွေက အထင်ရှားရှိခဲ့ပါသည်၊ မန္တလေး ရဟန်းပျိုက လွတ်လပ်ရေးလည်း ရနေပြီ သံဃာ့အဖွဲ့တွေ ဖျက်မည်ဟု သံဃာတွေက ပြောတဲ့အခါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက သံဃာ့အဖွဲ့တွေ မဖျက်ရန် ဆက်လက်ရှိသင့်တဲ့ အကြောင်းနှင့် တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ သံဃာ့အဖွဲ့ အမှန်တကယ်လိုအပ်ကြောင်း အထူးလျှောက်ထားခဲ့တာတွေရှိပါတယ်၊၊
တိုင်းပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ အမျှော်အမြင်ကြီးမားမူနှင့်အတူ သံဃာ့အဖွဲ့တွေ ရှင်သန်အောင်သာ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပါ၊ ဗိုလ်ချုပ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပေမဲ့ ဘာသာအားလုံးကို တန်းတူလေးစားတာပါ၊ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာ လုပ်မယ်လို့ အစည်းဝေးလုပ်တဲ့အခါမှာ ဗိုလ်ချုပ်က လက်မခံဘဲ ပယ်ခဲ့တာရှိပါတယ်၊ ဒါတွေဟာ ညီမျှမူ တန်းတူ ရည်တူ သဘောနှင့် ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ အနှစ်သာရကို ဖော်ဆောင်သွားခဲ့တာပါ၊၊
ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ဘာသာရေးသမားအမည်ခံပြီး ပိတ်ဖြူပတ် ရွေတဂုံ တက်ဖို့အချိန်မရှိဘဲ၊ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်သာ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ခဲ့တဲ့ အတွက် တိုင်းပြည်ရှိ ဆရာတော် သံဃာတော်များကလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကို ချစ်ကြပါတယ်၊ တိုင်းပြည်မှာ အများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သလို ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် စာဖတ်၊စာရေးတာ ၀ါသနာပါတာကြောင့် ဘာသာရေးစာပေတွေကို ဖတ်ဖြစ်မယ် ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ် မိန့် ခွန်းတွေ အချိုက ဘုရားဟောတွေကို ကိုးကားသွားတာတွေ ရှိပါတယ်၊
ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ရိပ်သာဝင်တရားထိုင်ဖို့ ဘုရားဝင် ပုတီးစိတ်ဖို့ အချိန်မရခဲ့ပါဘူး၊ တော်လှန်းရေးကို ဆင်နွဲနေသည့် လူငယ်အောင်ဆန်းဘ၀ကို အားလုံးက မြင်ရောင်ကြည့်ပါ၊
သို့သော်လည်း စာဖတ်လို့သိတဲ့ ဘာသာရေးအသိကို ဗိုလ်ချုပ်က လက်တွေ့ကျကျ ပြည်သူတွေကို သတ်ခဲ့တာမရှိ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ စည်းစိမ်အိုးအိမ်ကို ခိုးယူတာမရှိ၊ မော်ဒယ် ကောင်မလေးတွေကို ငွေးပေးပြီး စော်ကားခဲ့တာလည်းမရှိ၊ကတိမတည်သစ္စာမရှိတဲ့ မုသားစကားလည်း ပြည်သူကို မလှဲ့ဖျားခဲ့ဘူး၊ ဒါတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အရိမ်ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ပြည်သူတွေက လက်ခံသလို ကြည်ညိုလေးစားကြတာပါ၊၊
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာက အလုပ်က သက်သေပြတာပါ၊ ဘာသာရေးအသိနှင့် အကျင့်တရား ဗိုလ်ချုပ်က တထပ်တည်း ကျအောင် လုပ်ကိုင်သွားတာကို မြင်အောင် ကြည့်စေချင်ပါတယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဆင့်မျိုးမဟုတ်ဘူး၊ သာသနာကိုကြည်ညိုလေးစားနဲ့ နှလုံးသားနှင့် ဘုရားကိုဖက်၊သံဃာကို အသက်တမျှ မြတ်နိုးကိုးကွယ် လူထုကိုယ်တော့ လွတ်မြောက်အောင် ဦးဆောင်သွားခဲ့သူပါ၊ အတ္တအကျိုးထက် အများအကျိုးကို ဆောင်ရွက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ သာမာန်မဟုတ် တကယ်ကိုယ်ပဲ အသက်ပေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ တိုက်ပွဲကို ကြုံဖူးသူတိုင်း ပိုနားလည်မှာပါ၊၊
လူသာမာန်တို့ လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ကို ဗိုလ်ချုပ် လုပ်သွားခဲ့သည်မို့ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ သူတော်စင် အစစ်ပါပဲ၊
သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့ချုပ်
27 September News
ကျပ်ငါးထောင်တန် ငွေစက္ကူ၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ
ကာမဂုဏ်မခံစားဘဲ တရားအားထုတ်နေသော သူတို့ကို(ဗုဒ္ဓသံဃာ) သူတော်သူမြတ်များ အဖြစ် ယခုခေတ် လူတို့က အသိအမှတ်ပြုကြသော်လည်း ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ကျင့်စဉ်သည် ဤကမ္ဘာ၊ ဤလူ့ဘုံနှင့် အံမ၀င်၊ ခွင် မကျဘဲ သူတို့၏ ၀ါဒသည်လည်း ကြာရှည်လေးမြင့်တည်တံ့မည်ဟု လူတို့ယုံကြည်ကြ၏။ သို့ရာတွင် ဤ ယုံကြည်ချက်မှာ သမိုင်းဖြစ်ရပ်များနှင့် ဆန့်ကျင်လျက်ရှိ၏။
THE VOICE 5-47(SEPTEMBER 28 ISSUE)
21 years of NLD Birthday [ 27.9.2009 ]STATEMENT
Voice of Burma (26 September Issue)
ဦးသုဝေ ထံသို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးပို့
သံဃာအဖွဲ့ချုပ်-မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ မှ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသုဝေ ထံသို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးပို့
၂၆ . ၉ . ၂၀၀၉ ( စနေနေ့) ၊ ထွေးထွေးခိုင်
သံဃာအဖွဲ့ချုပ်-မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ မှ ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် မှ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသုဝေ ထံသို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ တစ်စောင် ပေးပို့လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထိုအိပ်ဖွင့်ပေးစာနှင့် ပတ်သက်ပြီး သံဃာအဖွဲ့ချုပ် - မြန်မာနိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး တာဝန်ခံ အရှင်ပါရမီခန္တီအား ဟံသာဝတီက မြေမြန်းရာတွင်-
ဦးဇင်းတို့အနေဖြင့် ဒကာကြီး ဦးသုဝေအား အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာ့ သမိုင်း တစ်ခေတ် အပြောင်းအလဲကို ကြိုးစားဖန်တီး လုပ်ဆောင်နေကြရာတွင် စစ်သမိုင်းဆိုးတစ်ခေတ်၏ နောက်ဆုံးသမိုင်းတရားခံများ အဖြစ်သို့ မဖြစ်စေ ရန်အတွက် အိပ်ဖွင့်ပေးစာကို ပေးရခြင်း ဖြစ်ပြီးအမှန်စင်စစ် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲသည် တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးအတွက် ထွက်ပေါက်မဟုတ်ပါ။ တိုင်းပြည် အပြောင်းအလဲ အတွက် အခွင့်အရေးဟုဆိုရာတွင်လည်း နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ နိုင်ငံရေး အသွင်ကူးပြောင်းအုပ်ချုပ်မှု ပုံစံသစ် စစ်ဂိုဏ်းဂဏ အုပ်ချုပ်ရေးအသွင်သို့ ကူးပြောင်းရေးသာဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံရေးဆွဲရာတွင် အများသိပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း တဖက်သတ် ရေးဆွဲ ခဲ့ကြပြီး၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြခံဥပဒေ အတည်ပြုရေး ပြည်သူဆန္ဒခံယူပွဲသည်ပင်လျှင် နာဂစ်မုန်တိုင်း ကာလအတွင်း ဇွတ်အတင်း အတည်ပြုခဲ့ကြသည့် စစ်ကျွန်ပြုရေး လမ်းစဉ်အား ဝိုင်းဝန်းကာကွယ် တားဆီးနိုင်စေခြင်းအတွက်လည်း ရည်ရွယ်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုအိပ်ဖွင့်ပေးစာတွင်တိုင်းပြည် အပြောင်းအလဲနှင့်စပ်လျှဉ်းပြီး စစ်အစိုးရ၏ စိတ်ကြိုက်သက်သက် ပြောင်းလဲသွားစေမည့် လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တယောက်အနေဖြင်၎င်း၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသစ်၏ ဥက္ကဌ တယောက်နေဖြင့်၎င်း ပြန်လည် စဉ်းစား သုံးသပ်ရန် လုံလောက် သည့်အချိန် မရှိသေးသကဲ့သို့ တိုင်းပြည်၏ အပြောင်းအလဲတွင်လဲ အနာဂါတ်မျိုးဆက်များအတွက် အာမခံချက် ပေးနိုင်သည့် အခြေအနေများကို ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ရန် အချိန်မှီသေးသည်ဟု သံဃာတော်များနှင့် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများက ရှုမြင်သည့်အကြောင်းနှင့်အနာဂါတ်တိုင်းပြည်သည် စစ်ဂိုဏ်းဂဏအာဏာရှင်များအောက် ကျရောက်စေမည့် အပြောင်းအလဲမျိုးမှ ကာကွယ် တားဆီးခြင်း သည် ကျွန်ုပ်တို့တမျိုးသားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မဆလ တပါတီအာဏာရှင်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး ကာလ မတိုင်မှီခေတ်အဆက်ဆက်မှစ၍ ယနေ့စစ်အာဏာရှင် ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဘဝများ အသက်ပေါင်း များစွာကို ပေးဆပ်ခဲ့ ကြသူတို့၏ သစ္စာကို စောင့်သိသောအားဖြင့် အမှန်တရားအားလုံးကို မျက်ကွယ်ပြုထားသည့် အပြောင်းအလဲ လမ်းကြောင်း ပေါ်တွင် အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တဦးအနေဖြင့် ဆက်လက်ရပ်တည်မှု၊ ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေမှုများကို နောက်ဆုတ် သင့်ကြောင်း၊ပြည်သူ လူထု ရှေ့မားမားမတ်မတ်ရပ်ပြီး စစ်မှန်သည့် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးကြိုးပန်းမှုကြီးတွင် ပါဝင်ရန် သံဃာထု တရပ်လုံး နှင့် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးကြိုး ပန်းနေကြသူများမှ တိုက်တွန်းကြောင်းစသည်ဖြင့်ပါရှိပါသည်။
ဦးသုဝေသည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အစိုးရဆန့် ကျင်ရေးစာရွက်စာတမ်းဝေငှ မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခံရပြီး၂၀၀၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့သူ ဦးသုဝေသည်စက်တင်ဘာလ ၁၄ရက်နေ့ က ရန်ကုန်မြို့ ဒေါ်လဖင် စားသောက်ဆိုင်တွင် “၂၀၁၀ မြန်မာနိုင်ငံရေး သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲ”ဟု အမည်တပ်ထားသည့် ပွဲတစ်ခု ကို ကျင်းပပြီးနောက် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ ဟူသော နာမည်ဖြစ်ပါတီသစ် တစ်ခုတည်ထောင်က ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ် ပြိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီး နောက် သံဃာအဖွဲ့ချုပ် - မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ မှ ပထမဆုံး အိပ်ဖွင့် ပေးစာ ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/26/20090အကြံပြုခြင်း
၂၆ . ၉ . ၂၀၀၉ ( စနေနေ့) ၊ ဇာနည် (ပခုက္ကူ)
ကျနော်တို့ ပခုက္ကူဟာ အရောင်းအဝယ် အချက်အခြာကျတဲ့ နေရာတခုဖြစ်တဲ့အပြင် စီးပွားရေးလည်း ဖွံဖြိုးပြီး မန္တလေးပြီးရင် ဗုဒ္ဓသာသနာ နေလိုလလို ထွန်းကားတဲ့အရပ်ပါ။ တန်ခိုးကြီး ဘုရားတွေဖြစ်တဲ့ သီဟိုဠ်ရှင်၊ ကမ္ဘာကျော် တံကဲရှိတဲ့ ရွှေကူဘုရား၊ ဖေါင်တော်ဦးနဲ့ မြစ်ကမ်းနဘေးက သာယာတင့်တယ်စွာ သပ္ပါယ်တည်ရှိနေတဲ့ ရွှေမုဋ္ဌောဘုရားတို့ဟာ ပခုက္ကူရဲ့ ကျက်သရေဆောင်တွေပါ။
ဒီလို ပရိယတ်တင် မဟုတ်ဘူး၊ ပရိပတ်တွေပါ နည်းပေးလမ်းပြနေတဲ့ မိုးကုတ်ရိပ်သာလို၊ မဟာစည်ရိပ်သာတို့လို ကမ္မဌာန်း ဘဝနာ နည်းပေးတဲ့ ရိပ်သာတွေလည်း အများကြီးဗျ။ သီလရှင်တွေအတွက် စာဝါပို့ချနေတဲ့ ကျောင်းတွေလည်း အများကြီးပဲ။ ပရိယတ်ဘက်မှာ စာဝါလိုက်မယ်ဆိုရင် ပခုက္ကူ စာချနည်းကို မသင်ဘူးတဲ့ ဘုန်းကြီးဟာ ပညာစုံတယ်လို့ ဆိုမရဘူးလို့ ဆရာတော်ကြီးတွေ မိန့်ခဲ့တာ ကြားဖူးပါရဲ့။ အမရပူရ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်၊ ကျေးဇူးတော်ရှင် အရှင် ဇနကာဘိဝံသ
ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ တဘဝသာသနာ ထေရုပ္ပတိမှာ ပခုက္ကူဟာ သာသနာထွန်းကားကြောင်းနဲ့ ဒကာဒကာမတွေက သံဃာတော်တွေကို ကြည်ညိုရာမှာ အထူးအားရမိကြောင်း ဖတ်ဖူးခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အရိုးခံစိတ်ရင်းကောင်းပြီး ခန္တီပါရမီလည်း တော်တော်ရှိကြတယ် ပြောရမလား။ မဆလ ၊ နအဖ က အကွက်ချ ဖျက်ဆီးခြောက်လှန့်ထားလို့ မနိုင်လို့ သီးခံနေကြတယ်ဆိုရမလား၊ ကျနော် ၈ တန်း က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၈၈ နောက်ပိုင်း လူထုအများစုပါတဲ့ အုံကြွမှု မဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျ။
ဖြစ်မယ့်ဖြစ်တော့လည်း သြဂုတ်လလယ်မှာ နအဖ က လောင်စာဆီဈေး အဆမတန် တက်လိုက်တော့ ရင်ထဲမှာ ကြိမ်မီးအုံးသလို ခံစားနေရတဲ့ မီးက ထတောက်တော့တာပါပဲ။
ဘာပြောကောင်းမလဲ၊ ဘေးက လက်အုပ်ချီနေတဲ့ ပြည်သူတွေ လက်ခုပ်တီးလိုက်တာ တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ပါပဲ။ ပရိသတ်ကလည်း လမ်းကို ညွတ်နေတာပဲ။
သံဃာတော်တွေကလည်း ကြည်ညိုစရာ ကောင်းလိုက်တာ။ ဘုရားရှင် ရဟန်း ၅ဝဝ နဲ့ ကြွချီလာသလိုကို စိတ်ထဲမြင်ယောင်လိုက်မိတယ်။ သံဃာတန်းကြီး ကြွချီတာဆုံးမှ ကျနော်လည်း သမီးပါတာကို အမှတ်ရပြီး အိမ်ကို အပြေးပြန်ပို့ပြီး တောက်လျှောက်ပြန်လာပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ သေနတ်သံ ၂ ချက်လောက် ကြားတော့ ထိတ်ပြာပြီး ဦးဇင်းတွေဆီ အရောက်ပြေးတဲ့အခါ လမ်းပေါ်မှာ ဘုန်းကြီးစီးဖိနပ်တွေ ကျဲပြန့်နေပါပြီ။
မျက်ရည် မဆယ်နိုင်ဘူး။ ကျနော်က မျက်ရည်လွယ်တတ်တယ်။ ဒါနဲ့ ပြန်လှည့်လာရင်း ကျောင်းတိုက်တွေ ဝင်ကြည့်တယ်။ ဘယ်ကိုယ်တော် ပါသွားတယ်၊
ပျံတော်မူတယ်ဆိုတဲ့ ကောလာဟလ သတင်းတွေကြောင့် ဆေးရုံပြေး၊ ရင်ခွဲရုံပြေးကြည့်တယ်။ မရှိပါဘူး၊ တော်သေးတာပေါ့။ ဒါနဲ့ ကျောင်းတိုင်း လိုက်မေးတော့ ၁ဝ ပါး အဖမ်းခံရသလို ဘာလိုလိုနဲ့ ဖြစ်နေရော။ နောက် ညနေကျ ဆရာတော်ကြီးတွေကို အာဏာပိုင်ဆိုသူတွေက အလက (၃) ကျောင်းထဲ ပင့်ပြီး ဆွေးနွေးတယ်။
ဆရာတော်တွေ တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့် ဖမ်းထားတဲ့ သံဃာတွေ ပြန်လွတ်ခဲ့တယ်။ ပြန်ကြွလာတဲ့ ဆရာတော်ကြီးကို လျှောက်ထားကြည့်တော့ ၃ ပါး အဖမ်းခံထားရတာ ပြန်လွှတ်ပေးပြီဆိုလို့ ဒီကိုယ်တော်တွေကို ဘယ်လိုနေလဲ မေးကြည့်ရတယ်။
ရေဒီယိုတွေမှာ ကာယကံရှင် ကိုယ်တော်တွေ ကိုယ်တိုင် မိန့်ခဲ့တာကို ခင်ဗျားတို့ နားထောင်ခဲ့ရင် သိမှာပါ။ ကျနော်လည်း မီဒီယာတွေမှာ အဖြစ်မှန်တွေ ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျနော် မခံနိုင်လွန်းလို့ တော်တော်ကို ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဖမ်းခံ အနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ ဦးဇင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဗောဓိမဏ္ဍိုင်ကျောင်းက အရှင် စန္ဒိမာ၊ အနောက်တိုက်က အရှင်ပညာစက္ကနဲ့ အရှင်ပညာနန္ဒ၊ သူတို့ ပျံတော်မမူသေးပါဘူး၊ အခု မေးရင်လည်း ရပါသေးတယ်။ သူတို့ကို နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့သတင်းကို နိုင်ငံရေး တက်ကြွသူတွေနဲ့ မီဒီယာတွေ ပေါင်းပြီး လုပ်ကြံဖန်တီးတယ်ဆိုတာ နအဖ က ပြောခဲ့တယ်။ ဟုတ်၊ မဟုတ် လှမ်းမေးကြည့်လေ။
နောက်နေ့ မနက်မှာ တိုင်းသာသာနာရေး ဦးစီးနဲ့ ခရိုင်အဆင့်ဆင့်က တာဝန်ရှိသူတွေဟာ စာသင်တိုက်တွေကို ဝင်ပြီး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ မပါဖို့ ဝင်လျှောက်တော့တာပဲ။
ဒီမှာတင် လောလောလတ်လတ် ခံထားရတဲ့ သံဃာတော်တွေက မကျေနပ်လို့ အလယ်တိုက်အရောက်မှာ ဝန်းတံခါးပိတ်ပြီး အာဏာပိုင် ၁၃ ယောက်ကို ဖမ်းလိုက်တယ်။ သူတို့စီးတဲ့ ကားတွေ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ ဒါ ကျနော်တော့ လူငယ်အတွေးနဲ့ မမှားဘူးပဲ ထင်တယ်။ ဒီသတင်းတွေ ကျနော့်ကို မီဒီယာက မေးတော့ အမှန်အတိုင်း အကုန်ပြောဖြစ်တယ်။
ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်မိတဲ့ ခင်ဗျားကတော့ ဘယ်လိုနေမယ် မသိဘူး၊ ကျနော်တော့ သွေးဆူနေသေးတယ်ဗျာ။ ကျနော့်လို ပုန်းအောင်းနေရတဲ့ ပခုက္ကူက ဦးဇင်းလေးတွေ ရှိသေးတယ်။ တွေ့များ တွေ့ခဲ့ရင် ကျနော် ဒီက စောင့်နေပါတယ်လို့။ ပခုက္ကူမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဦးဇင်းတွေနဲ့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေကိုတော့ ပြောချင်တာ တခုရှိတယ်။ ကျနော့်နိုင်ငံရေးအဆင့် မူကြိုအဆင့်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ မှားရင် ခွင့်လွှတ်ဗျာ။ ကျနော်တို့ ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်အမေနဲ့ အတူနေချင်တယ်။
အဲဒီတော့ ကျနော့်တို့ နိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာရှင် ရှိနေသေးသရွေ့ သားတကွဲ မယားတကွဲ ဒုက္ခ၊ မိဘမဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တွေ၊ မတရား စော်ကားခံရတာတွေ၊ ဖိနှိပ်ခံရတာတွေ ရှိနေဦးမှာ မလွဲပါဘူး။
ဒါတွေ ချုပ်ငြိမ်းသွားအောင် ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေမှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။ လူဦးရေ သန်း ၅ဝ ကျော်တဲ့ ပြည်သူက လက်တဆုပ်စာ အာဏာရှင်ကို မနိုင်ဘူးဆိုတာ ရာဇဝင်ရိုင်းပါတယ်။ ဒီတော့ ချိနဲ့သူကို ဖေးကူ၊ အားနည်းသူကို လက်တွဲ၊ စည်းလုံးညီညာတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ဘာသာသာသနာအတွက် အမြန် တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
မကြာခင်လာတော့မဲ့ တဖက်သတ်ကျင်းပမဲ့ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အပြတ်ဖြတ်သင့်ပါတယ်။
၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ကျနော် မဲမပေးခဲ့ရပေမဲ့ တကယ် သန့်ရှင်းတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လို့ အနိုင်ရပါတီ အန်အယ်လ်ဒီဟာ အနိုင်ရပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ လက်ရှိ အာဏာရှင်တွေ ညှိနိုင်းပြီး တိုင်းပြည်ကောင်းအောင် မလုပ်မချင်း ကျနော်တို့ ဆက်တိုက်ရမှာပါပဲ။
ရန်ကုန်မြို့ နယ်အချို့ ၌ သံဃာ့သွေး မြေကျခဲ့ရခြင်း နှစ်ပတ်လည် လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်
စစ်အစိုးရ လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားသည့်ကြားမှ ယနေ့ (26.9.09) စနေနေ့နံနက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့ နယ်အချို့ ၌ ကျောင်းသားလူငယ်များမှစစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအတွင်း သံဃာတော်များ သွေးမြေကျခဲ့ရသည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်လမ်းမများပေါ်တွင် ဆေးနီများလိုက်လံပက်ဖြန်းကာ နအဖဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကို(2007)မျိုးဆက်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ကျောင်းသားများနှင့်အခြားတော်လှန်ရေးအင်အားစုများ ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။လှုပ်ရှားမှု၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ........သံဃာများသွေးမြေကျခဲ့ရခြင်းကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးက
မမေ့သေးကြောင်း န.အ.ဖစစ်အစိုးရအားသတိပေးခြင်းနှင့်ပြည်သူများအားလည်း မမေ့ပျောက်စေရန်အသိပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း (၂၀၀၇)
လှုပ်ရှားမှုကိုလသာ၊ကျောက်တံတား၊ဗိုလ်တထောင်၊သာကေတ ၊ဒေါပုံ၊ တာမွေ၊ကျောက်မြောင်း၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ တောင်ဥက္ကလာ၊မြောက်ဥက္ကလာ မြို့နယ်များ၏အဓိကလမ်းမကြီးများနှင့်ကားမှတ်တိုင်များတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၀ မှလွဲ၍ တခြားနည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်
စစ်အုပ်စုကတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပြင်ဆင်စိုင်းပြင်းနေပါတယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပ ဒေကို အပြီးသတ်အတည်ပြုနိုင်ဖို့ပါ။ ဒီလိုအသက်သွင်းနိုင်မှ သူတို့စစ်အုပ်စုဗျူရိုကရက်တွေက လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူလူထုကြီးကို စစ်ကျွန်ပြု စစ်ကျွန်ဇာတ်သွင်းပြီး စစ်သမ္မတနိုင်ငံကို ထူထောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ ပေမယ့်လို့ ခက်နေတာက သူတို့တွက်ထား ထင်ထားသလို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး ဖြစ် နေပါတယ်။
အဓိက ကတော့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေပေါ့။ သူတို့တွက်ထားသလို လုပ်လို့မရဖြစ်နေတယ်။ အားလုံးနီးပါးလောက် လို့ ပြောနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ စစ်အုပ်စုပြောသလို လိုက်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ အကြောင်းပြန်ကြတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေး ကောက်ပွဲပြုလုပ်ဖို့ စစ်အစိုးရက ပြင်ဆင်စိုင်းပြင်းလာချိန်နဲ့ တပြိုင်တည်းမှာပဲ အပစ်ခတ်ရပ်စဲထားတဲ့ တိုင်း ရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို နအဖက ညောင်နှစ်ပင်ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း တခုတည်းသော တပ်မ တော်ဖြစ်ဖို့အတွက် နယ်ခြားစောင့်တပ်၊ ပြည်သူ့စစ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ဖိအားပေးရာ မှာ ငြင်းဆန်မှုတွေနဲ့ချည်း ကြုံတွေ့နေရလို့ ကိုးကန့်တိုက်ပွဲကို ဖန်တီးပြီး ကျန်တဲ့အပစ်ရပ်အဖွဲ့(လေး)တွေကို စစ်ရေးအရ ခြိမ်းခြောက်ပြတဲ့ သဘောမျိုးလို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
စစ်အုပ်စုဟာ ဘယ်ကလောက်ထိ ကောက်ကျစ်လိမ်ညာတတ်တယ်၊ ယုတ်မာရက်စက်တတ်တယ်ဆိုတာ ဒီ ကိုးကန့် အဖြစ်အပျက်က မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာပဲ မဟုတ်လား။ ပြေလည်နေတုန်းကတော့ တမျိုး၊ မပြေ လည်တဲ့အချိန်ကျတော့ တမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာ အထင်အရှားပဲလေ။ ဝေစုမြက်မြက်ကလေး ရနေတုန်းက တ မျိုး၊ ဒီနေရာမှာ စကားစပ်လို့ စစ်ဗိုလ်(ချုပ်)ကတော်တွေ မှာတာဆို ကိုးကန့်ခေါင်းဆောင် ဦးဖုန်ကြားရှင်က က လစ်ကလေးကအစ အကုန်ဝယ်လာပေးတာ။ ဘာမှ စာရင်းပြန်ရှင်းပေးစရာမလိုဘူး။ အဆင်ပြေနေ သဘော တွေ့နေကြတုန်းကလေ။ ဟော အခု အဆင်မပြေတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး အကြောင်းပြလိုပြ၊ လက်နက်စက်ရုံရှိ တယ်ဆိုပြီး ရမယ်ရှာလိုရှာနဲ့ နောက်ဆုံး လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲအထိ ရောက်သွားတော့တာပါပဲ။
စစ်အုပ်စုရဲ့ ဖန်တီးစွပ်စွဲချက်တွေကို ကိုးကန့်ခေါင်းဆောင် ဦးဖုန်ကြားရှင်က နှစ်ဘက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ် ကာလမှာပဲ ဩဂုတ်လ (၂၈) ရက်နေ့မှာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီသို့ လိပ်မူတပ်ပြီး ယင်းတိုက်ပွဲအခြေအ နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အထူးကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြေညာချက်အရ ကိုးကန့်ခေါင်းဆောင် ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်မှာတော့ စစ်အစိုးရက မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းသိုလှောင်မှု စတဲ့ ဖန်တီးချက်များနဲ့ တရားစွဲဆိုမှုဟာ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့နဲ့ ပြည်သူများအပေါ် နိုင်ငံတကာမှ အထင်မှားအောင် လုပ်ကြံဖန်တီးခြင်းဖြစ် ပြီး နိုင်ငံတကာနဲ့ နအဖတာဝန်ရှိသူများရှေ့မှာ ကိုးကန့်နယ်မြေအား မူးယစ်ဆေးဝါး ကင်းရှင်းသွားပြီဖြစ် ကြောင်း ၂၀၀၂ ခုနှစ်က အတိအလင်း ကြေညာထားခဲ့ကြောင်းနဲ့ ဆက်လက်ပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် လုပ်ရပ်အတိုင်း ကျန်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကိုလည်း မကြာသော အချိန်ကာလတခုအတွင်း တိုက်ခိုက်ဝါးမျိုနိုင်သဖြင့် စစ်အစိုးရအား လက်တွေ့ညီညွတ်စွာ ယနေ့မှစပြီး တိုက်ပွဲဝင်ရန် ကိုးကန့်ခေါင်း ဆောင် ဦးဖုန်ကြားရှင်က သတိပေးတောင်းဆိုကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။
ကျန်အဖွဲ့တွေကိုတော့ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိသေးဘဲ လတ်တလော စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီး ဘီ လူးခေါင်းကို မင်းသားမျက်နှာဖုံးအတုစွပ်ပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ ဆက်လုပ်နေပါတယ်။ နအဖနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပြီးမှာ ကေအိုင်အိုနဲ့ မွန်ပြည်သစ်တို့ဆီက နအဖစစ်အုပ်စုရဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပါ တခုတည်း သော တပ်မတော်ဖြစ်ရေးကို လိမ်မာပါးနပ်စွာနဲ့ ရှောင်ထွက်ပြီး ပါတီအသစ်ထပ်ဖွဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ ကျားကွက်သစ်တော့ ထွက်လာပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေဟာ နအဖစစ်အုပ်စုနဲ့ စစ်ရေးတိုက် ခိုက်မှုတွေ၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေ မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာ ရှင်းလင်းမြင်သာပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံ ရေးနည်းအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ အဖြေရှာမှ စစ်မှန်တဲ့ အဖြေမှန်ရမယ်ဆိုတာကို အားလုံးက သဘော ထားရှိကြကြောင်း လက်တွေ့ပြသနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် အခုလည်း စစ်အုပ်စုရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို မလိုက်လျောနိုင်ကြောင်း ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းဆိုတုန့် ပြန်ခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အင်အားစုများကြားမှာ လူအင်အားကော စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအင်အား ကော အတောင့်တင်းဆုံးလို့ဆိုတဲ့ UWSA အဖွဲ့ကိုလည်း စစ်ပြုတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ စစ်အင်အား (၁) သောင်းကျော် နဲ့ အားဖြည့်ဝန်းရံထားပြီး စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေတာကို ကြားနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သူတို့(နအဖ)ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို လက်မခံနိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို နည်းလမ်း ပေါင်းစုံနဲ့ အကျပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီး စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အ ကဲခတ်သူများရဲ့ ဝေဖန်ပြောကြားချက်ဟာ မှန်ကန်တဲ့ အကဲဖြတ်ချက်လို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တော့ စစ်အုပ်စုက ချက်ချင်းလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပစ်ချင်တာပါ။ အဲဒါလုပ်လို့မရလို့ တဖက်လှည့်နဲ့ နည်း နာပြောင်းပြီး နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခိုင်းပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချုပ်ကိုင်ခြယ်လှယ်သွားမှာလေ။ ဒါကို အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေကလည်း နားလည်ကြ ရိပ်မိကြမှာပေါ့။ အစကတည်းကမှ အပစ်ရပ်ချင်လို့ ရပ်ထားတာ မှမဟုတ်တာ၊ အခြေအနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သိပ်စိတ်မပါလှပေမယ့် အပစ်ရပ်တဲ့နည်းကို ရွေးလိုက် ရတဲ့ဟာကို။ လတ်တလော ရွေးခြယ်စရာမရှိလို့ လုပ်လိုက်ရတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့အပစ် ရပ်အဖွဲ့တွေ (အနည်းစု လေးပါ) ကတော့ ခြေလွန်လက်လွန်ဖြစ်သွားပြီး ပြန်နှုတ်လို့မရတော့ဘူး ဖြစ်သွားကြ တယ်။ ပြန်မရုန်းထွက်ချင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ အကျိုးစီးပွားမက်လုံးတွေနဲ့ ချည်ထားလိုက်တာလည်း ပါ မှာပေါ့။ KNU က ခွဲထွက်သွားတဲ့ ဒီကေဘီအေလိုအဖွဲ့မျိုးပါ။ ဦးဇခုန်တင်ရင်းတို့ (NDAK) အဖွဲ့လိုမျိုး၊ ကလလ တ၊ ရလလဖ စတဲ့ အဖွဲ့မျိုးတွေလည်းရှိနေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့လည်း အကျိုးစီးပွားချင်း၊ အခြေအနေ ချင်း၊ အနေအထားချင်းလည်း မတူကြသေးဘူးမဟုတ်လား။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ရန်သူရဲ့စီမံကွပ်ကဲချုပ်ကိုင်မှု အောက်မှာ နေနေရပြီလေ။ ဒါကတော့ အတူတူပါပဲ။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့လို အပစ်ရပ်စဲထားတဲ့အဖွဲ့ကိုတော့ သူတို့တွက်ထားသလို လုပ်မရတော့ နယ်ခြားစောင့် တပ်အဖြစ် အသွင်မပြောင်းနိုင်ရင် ပြည်သူ့စစ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းနိုင်မလားလို့ အကဲစမ်းကြည့်ပြန်ရော။ မွန် ပြည်သစ်ဘက်က ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ ငြင်းလိုက်တော့ တော်တော်လေး မကျေမချမ်းဖြစ်သွားတာပေါ့။ မွန် ပြည်သစ်ပါတီဆိုတာကလည်း သာမာန်အဖွဲ့လေးမှမဟုတ်တာ၊ အုပ်စိုးသူအဆက်ဆက်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန် လာခဲ့တဲ့ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးပါတီကြီးပဲဟာ။ ဒါမျိုးသွားလုပ်လို့ မရဘူးလေ။ နိုင်ငံရေးရေချိန်က စကားပြောတာပေါ့။ သူတို့တွေ ဘာလုပ်ရင် ဘယ်ခြေလှမ်းလှမ်းတယ် ဘယ်အဆင့်ထိ ရောက်သွားမယ်ဆိုတာကို နိုင်ငံရေးအရ အ တွေ့အကြုံအရ တွက်ချက်နားလည်တာပေါ့။ အပစ်ရပ်စဲထားတာ ကာလအားဖြင့် ဆယ်စုနှစ်တခုတောင် ကျော် လာခဲ့ပေါ့။ နိုင်ငံရေးအရ တန်းတူရည်တူထား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာ (၁၄) နှစ်တာကာလအတွင်း တကြိမ်တခါမှ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ဟာကို။ လက်နက်မရှိတော့တာနဲ့ သွားပြီဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက်ထားပြီးသား လေ။
ရေးမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အခြားအပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေလည်း အများကြီးကျန်ရှိပါသေးတယ်။ ဒီနေရာမှာ အား လုံးရဲ့ ဘုံတူညီချက်က နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို နိုင်ငံရေးနည်းအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာညှိနှိုင်းယူကြဖို့ မှာ တသဘောတည်းရှိကြပါတယ်။ နအဖဘက်ကသာ တဖက်သတ်ငြင်းဆန်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီး သန်းရွှေဘက်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာတဲ့နည်းလမ်းကို လုံးဝကို ပစ်ပယ်ထားတာပါ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးအာသီသကို လုံးဝမရှိတာပါ။
၁၉၉၀ ခုနှစ် မေလရွေးကောက်ပွဲကနေ ပြည်သူလူထုကြီးက (၈၂) % နဲ့ တခဲနက်တပြိုင်နက် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အ မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဆိုရင် မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို နိုင်ငံရေးနည်းအရ စားပွဲဝိုင်းမှာ ထိုင် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကို တစိုက်မတ်မတ် အစဉ်မပြတ် တောင်းဆိုနေလာခဲ့တာပါ။ နည်း သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ကို တလျှောက်လုံး တောင်းဆိုနေလာခဲ့တာပါ။ အခုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ “ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာ ချက်” ကို ကြည့်ရင်လည်း ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုပဲ ထပ်ပြန်တလဲလဲ တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဒီကြေညာချက်မှာ အဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ လက်ရှိရပ်တည်ချက် (၄) ချက်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ...
(က) အဖွဲ့ချုပ်ဒု-ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးနဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအ ကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး၊
(ဃ) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဃ) အချက်ဟာ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိရေး စနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးကြီးမှာ တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ တိုင်း ရင်းသားအင်အားစုအားလုံးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုအားလုံးရဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတဲ့ ဘုံ ရည်မှန်းချက်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ့် နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရေးဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာက တောင်းဆိုတိုက်တွန်းနေတဲ့ အချက်လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တဦးလည်းဖြစ်၊ သတင်းစာဆရာကြီးတဦးလည်းဖြစ် တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ကလည်း “အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ပေးရေးတောင်းဆိုချက်ကို လူထုအားနှင့် ထောက် ခံကြ” လို့ နှိုးဆော်တိုက်တွန်းထားသလို လောလောဆယ်မှာတော့ ကျနော်တို့ခံယူချက်အပေါ် ဘယ်လိုမှ တွေ ဝေသံသယစိတ်တွေ မပွားကြပါနဲ့။ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ဗမာပြည်သူလူထုကြီး တိုက်ပွဲဝင်ရယူနေတဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို အဓမ္မလုယူမယ့်၊ ရှင်လမ်းမရှိအောင် ချို့ယွင်းပျက်စီးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ထဲမှာ သွေးကြောင်တွေဝေစွာနဲ့ ဒူး ထောက်ပါဝင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဟာ ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ အမြဲအသင့်ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ အသက်သွေးချွေးတွေ၊ ဘဝတွေ အများကြီးစွန့်လွှတ်ရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့ ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတွေ ဆွတ်ခူးရယူနိုင်ရေး တိုက်ပွဲကို ဆက်လက်ဆင်နွှဲဖို့ဆိုရင်တော့ အသင့်ရှိတာထက်တောင်ပိုပါတယ်လို့ ဆရာဦးဝင်းတင်ကိုယ်တိုင် အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားထားတဲ့ “ကျင်းပဖို့မလိုတဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ”ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးထဲမှာ ထုတ်ဖော်ပြော ကြားထားပါတယ်။
၀ါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး လူထုဦးစိန်ဝင်းကလည်း ပြည်သူ့ဘက်ကို မျက်နှာမူကြဖို့နဲ့ ပြည်သူနဲ့ မကင်းကွာကြ ဖို့ကို မကြာသေးခင်လေးက အင်တာဗျူးတခုမှာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အားကိုးမနေ ဖို့၊ မမျှော်လင့်နေဖို့၊ စိတ်ကူးမယဉ်ကြဖို့၊ ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ့်ဖာသာ ဖြေရှင်းကြဖို့ကို ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ ဆော်ဩ ပြောကြားသွားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂတို့၊ လုံခြုံရေးကောင်စီတို့ကို လာဖြေရှင်းပေးနိုး စောင့်စားမျှော်လင့်နေကြ မှာလား။ မိမိပြည်တွင်းရေးကို မိမိတို့ကသာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဖြေရှင်းသွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထု ကြီးရဲ့ အံ့မခန်း စွမ်းပကားတွေနဲ့ တော်လှန်ပစ်နိုင်စွမ်းကို အခိုင်အမာ ပြတ်ပြတ်သားသား ယုံကြည်ကြရမှာဖြစ် ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာလည်း ကျနော်တို့ အတိုက်အခံအင်အားစုများလို့ ခေါ်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဟာ အ ချိန်ရဲ့ တိုက်စားမှုအောက်မှာ ဖရိုဖရဲဖြစ်လာသံတွေ ကြားနေသိနေရပါတယ်။ ပြင်ပလေထုဖိအားကလည်း အ သွေးအရောင်စုံ၊ အနံ့မျိုးစုံနဲ့ တဒင်္ဂအရှိတရားကို ထာဝရအမှန်တရားအဖြစ် ထင်အောင်မြင်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖက်လှဲတကင်း ဆွဲဆောင်ဖြားယောင်းမှုတွေကလည်း တိုးလို့သာကြားနေရပါတယ်။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအနေအ ထားဟာ အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းတိုင်းအတွက် သေနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအနေအထားမျိုး မဟုတ်ပါ၊ နှေးကွေးနေ တဲ့ အနေအထားမျိုးပါ။ စနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးတရပ်မှာ အချိုးအကွေ့တွေ၊ အတက်အကျတွေ၊ တော်လှန် ရေးအီလာမှုတွေဟာ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့မယ့် တော်လှန်ရေးပကတိတရားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကို တချို့သော ပြည်ပပညာရှိကြီးတွေ၊ တတိယအုပ်စုလို့ ခေါ်နေပြောနေကြတဲ့သူတွေက ရွေးစရာလမ်းမ ရှိတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် လတ်တလောအရှိတရားဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုသာ အခွင့်အလမ်းတရပ်အဖြစ် ယူရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာ တရားသေကျလွန်းနေပါတယ်၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ ဇွဲလုံ့လမရှိသူတို့ရဲ့ အလျှော့ပေးရေး ၀ါဒ၊ အညံ့ခံရေးအတွေးအခေါ်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ တော်လှန်ရေးအတွေးအခေါ် ချွတ်ခြုံကျသူတွေရဲ့ ဖြစ်မြဲ ဓမ္မတာပါ။ စစ်ဝါဒီတွေဟာ နောက်ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြီးစီးအောင် မရမက လုပ်နိုင် ကောင်းလုပ်နိုင်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ပြည်သူ့အောင်ပွဲမဟုတ်၊ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲရဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်းလည်းမ ဟုတ်ဘူးဆိုတာ တတိယအုပ်စုဆိုသူတွေ ပညာရှင်ဆရာကြီးတွေ နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ တကယ်နားမလည် တာဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ငါဘာကောင်လဲ ဘာဖြစ်နေပြီလည်းဆိုတာ ပြန်ဆန်းစစ်တာ ကောင်းပါလိမ့် မယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲက ပြီးသွားပြီ၊ သမိုင်းဖြစ်သွားပြီ လက်တွေ့နဲ့ မကိုက်ညီတော့ဘူး စသဖြင့် နအဖစစ် အုပ်စုရဲ့ ဘက်တော်သားအင်အားစုတွေက ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောနေကြသလို မဆလတဖြစ်လဲ တစညလိုပါတီ ကတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လေသံပြင်းပြင်းနဲ့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အပျက်မခံဘူးဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်သလို လုပ်နေပြန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPP) အတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးအေးသာအောင်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီဝင်လည်း ဖြစ်၊ ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ကရက်ရဲ့ ဥက္ကဌလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးပူကျင့်ရှင်းထန်တို့ရဲ့ ဒီ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ် သက်တဲ့ သဘောထားကလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ “ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာ ချက်” ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းကသာ တိုင်းပြည်ရဲ့အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ ရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် စစ်အာဏာရှင် ဖျက်သိမ်းရေးတိုက်ပွဲအတွက် မိမိကိုယ်ကို အတွေးအခေါ်အရ ကြံ့ခိုင်တောင့်တင်း ရေး၊ ကိုယ်ခံအားကောင်းရေးတို့အတွက် လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်သွားကြရပါမယ်။ အင်အားစုတွေအားလုံးအကြား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို အထူးအာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်သွားကြရမဲ့အချိန်၊ ကာကွယ်သွားကြရမဲ့ကာလ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒီတော့ ကျနော်တို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဟာကို အစွမ်းကုန် တိုက် ဖျက်ပစ်ကြဖို့သာ ရှိတော့မှာပေါ့။ မီးကုန်ယမ်းကုန် အားစိုက်ရုန်းကန် ထကြွကြရတော့မှာပဲ။ နောက်ဆုံး ပြည် သူ့အင်အားစွမ်းပကားနဲ့သာ နိုင်ငံရေးအာဏာအပြောင်းအလဲကို ဖော်ဆောင်ကြရတော့မှာပဲ။ ဘယ်နိုင်ငံတိုင်း ပြည်မှာမဆို ပြည်သူ့အင်အားနဲ့သာ အုပ်စိုးသူလူတန်းစားရဲ့ လက်ထဲရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအာဏာကို အုပ် စိုးခံ လူတန်းစားတွေရဲ့ ပြည်သူ့အင်အားစွမ်းပကားနဲ့သာ အဆုံးသတ် ပြောင်းလဲစေနိုင်ခဲ့တာပဲ မဟုတ်ပါလား။ ဒါကိုက ပကတိအမှန်တရားပဲ မဟုတ်ပါလား။
မိမိပြည်တွင်းရေးကို မိမိဘာသာ ဖြေရှင်းရုံမှတပါး တခြားနည်းလမ်းမရှိဖူးပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ပြည်တွင်းက စစ် အုပ်စုအောက်မှာ လူမှုဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းစုံကို ခါးစည်းကျိတ်မှိတ်ခံနေကြရတဲ့ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ ရ ဟန်းသံဃာ၊ ကျောင်းသားလူငယ်များ၊ အမှုထမ်းပေါင်းစုံနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ အမျိုးသားပြည်သူလူ ထုကြီးတရပ်လုံးကို ဆက်လက်မှီခို စည်းရုံးလုပ်ဆောင်ရင်း အမျိုးသားပြည်သူလူထုကြီးနဲ့ အတူတကွ လက်တွဲ တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေး မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းတွေကိုသာ ဆထက်ထမ်းပိုး အားထုတ်ကြိုးပမ်း ရုန်းကန်ရှာဖွေသွား ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာလည်း တပ်မတော်ရဲ့ အောက်ခြေတပ်မှူးတပ်သားများအကြား ပြည်ချစ်တပ်မတော်သားများ ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ဆောင်စည်းရုံးသွားရေးကိုလည်း အထူးအာရုံစိုက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေကို အားထုတ်လုပ်ကိုင်ထားရုံမှလွဲလို့ ကျနော်တို့ဟာ ဘာမှတွေဝေ စဉ်းစားနေစရာ မလိုပါဘူး။ အံ့ဩတကြီးဖြစ်နေစရာမလိုပါဘူး။ ပြည်သူလူထုကြီးကိုစည်းရုံး ပြည်သူ့အင်အားကို တည်ဆောက် ပြီး ဒီပြည်သူ့အင်အားနဲ့ပဲ နအဖစစ်အုပ်စုရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖျက်ဆီးပစ်ပြီး အမျိုးသားပြန်လည်ရင် ကြားစေ့ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးစားပွဲဝိုင်းကို တက်လှမ်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ရရင်တော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တခုတည်းသော ထွက်ပေါက်မဟုတ်ဘဲ တဒင်္ဂအရှိတရားတခု သာဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့ “ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်”ရဲ့ အနှစ်သာရပိုင်းဖြစ်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းကသာ အမှန်တကယ့် ထာဝရအရှိတရား ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
၂၀၀၉ စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/25/20090အကြံပြုခြင်း